विराज भन्छन्,‘भोजपुरी चलचित्र पनि गरिरहेको छु’ - Harekpal
विराज भन्छन्,‘भोजपुरी चलचित्र पनि गरिरहेको छु’
हरेकपल सम्वाददाता २१ पुष २०७६, सोमबार १४:०६ मा प्रकाशित
‘एक्सन स्टार’ को रुपमा चिनिएका विराज भट्ट सयको आसपासमा नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । नेपाली चलचित्रमा एक्सनमा नयाँ ट्रेन्ड स्थापित गरेका उनलाई हेर्नकै लागि पनि एक समय दर्शकको हलमा भीड लाग्थ्यो । विस्तारै आफ्नो स्टारडमले हलमा दर्शक तान्न छाडेपछि उनी भोजपुरीतिर हानिए । उनकै भनाई सापटी लिने हो भने बाघ ठूलो जंगलमा शिकार गर्न गयो ।
भोजपुरी मार्केटमा पनि उनले छोटो समयमै आफूलाई ‘स्टार’ को रुपमा उभ्याए । तीन दर्जनभन्दा बढी सुपरहिट भोजपुरी चलचित्र दिएका उनी अब नेपाली चलचित्रमा फर्किएका छन् । भोजपुरी मार्केटमा पनि उनले छोटो समयमै आफूलाई ‘स्टार’ को रुपमा उभ्याए । तीन दर्जनभन्दा बढी सुपरहिट भोजपुरी चलचित्र दिएका उनी अब नेपाली चलचित्रमा फर्किएका छन् ।
उनले ४ वर्ष अगाडि रोज राणा निर्देशित चलचित्र ‘जय परशुराम’ बाट नेपाली फिल्ममा पुनरागमन गरेका थिए । तर, यो चलचित्र नचल्दा उनको कमब्याक सफल हुन सकेन । त्यसपछि उनले फेरि बैंक ब्यालेन्स बढाउन भोजपुरी चलचित्रतिर सोझिए । अब भने विराज नेपाली चलचित्रलाई निरन्तरता दिने सोचमा छन् । ४ वर्षपछि उनी चलचित्र ‘साङ्लो’ लिएर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्दैछन् ।
शुक्रवार सार्वजनिक भएको चलचित्रको ट्रेलरलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । ट्रेलर हेरेपछि दर्शकले ‘बाघ फर्कियो’ भनेका छन् । अभिनेता विराजले आउँदो माघ २४ गते प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘साङ्लो’ बाट कमब्याक गर्दैगर्दा दर्शकको मनमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ कि उनी अब भोजपुरी चलचित्रमा फर्किन्छन् वा फर्किँदैनन् ? कतै नेपाली चलचित्रका लागि दुई दिने पाहुना त होइनन् ?
शुक्रवार चलचित्रको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा भोजपुरी चलचित्रमा फर्किने विषयमा अभिनेता विराजले भने- ‘मैले भोजपुरी फिल्म छाडेको छैन । हालसालै बम्बई पुगेर आएको हुँ । अब नेपाली चलचित्रमा चाहिँ निरन्तर काम गर्नेछु ।’ उनले भोजपुरी चलचित्रबाट कमाएको पैसाले ‘साङ्लो’ बनाएको पनि बताए । निर्माता, अभिनेता र निर्देशकको रुपमा काम गर्दा प्रेसर हुने उनी बताउँछन् ।